भिख माग्दै गाउँ पसेका चन्दने बाजे, त्यै गाउँको अधिपति भएछ - MONGOL KHABAR
भिख माग्दै गाउँ पसेका चन्दने बाजे, त्यै गाउँको अधिपति भएछ
लेखक - खड्क पामी आले मगर
हाल :- तनहुँ
कावासोती । कुरा केही बर्ष पहिलेको हो । एउटा मगर गाउँमा कतैबाट भिख माग्दै एक जना बाहुन आयो ! अनि एक जना मगर कहाँ आश्रय लिएर बस्न थाले । उसले निधारमा सधैं रातो टीका खरानी र चन्दन लगाउथ्यो, त्यसैले उसलाई गाउँलेले चन्दने बाजे भनेर चिन्दथ्यो ।
चन्दने बाजे, दिनभरि भिख माग्न गाउँ डुल्थ्यो अनि त्यहीँ मगरकहाँ आई रात काट्थ्यो । त्यहीँ बस्दा बस्दै उसले गाउँकै एउटी युवतीलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर विवाह पनि गरेछ । चन्दने बाजेले दाइजाेको रूपमा केही जग्गा पनि हत्यायाे, अनि मागेर जाेडेको पैसाले त्यही जग्गामा घर पनि ठड्याउन भ्यायाे ।
समय-क्रम चल्दै जाँदा चन्दनेका दुइवटा छोरा पनि जन्मे । छोराको नाम राम प्रसाद र श्याम प्रसाद राख्याे । राम प्रसाद र श्याम प्रसाद दिन भरि गाउँमा बरालिएर हिंड्थ्यो काम भने पछि सिन्को पनि भाँच्थिएन । समय बित्दै जाँदा चन्दने बाजे बूढो भएर भिख माग्न जान नसक्ने भए । अब चन्दने बाजेकोको परिवारलाई घर चलाउन गाह्राे भयाे । "जहाँ अभाव, त्यहाँ तनाव !" छोराहरू दिनदिनै झगडा गर्न थाले । अनि एक-अर्कामाथि दोष थुपार्न थाले । उनीहरू बीचकाे झगडाले ठूलाे रूप लियाे, गाउँलेहरू पनि दुई खेमामा बाँडिए ।
केही दिनपछि गाउँ-पालिकाको चुनाव घोषणा भयो, चुनाव पनि भयाे । राम प्रसादले गाउँपालिकाकाे अध्यक्षकाे पदमा उम्मेद्वारी दिए चुनाव पनि जित्याे । अनि भ्रष्टाचार गरेर अकुत धन-सम्पत्ति जाेड्याे । भाई श्याम प्रसादले दाइ राम प्रसादलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउन थाले । किनकि राम प्रसादले विकास बजेटको सबै रकम स्वाहा पारेको थियाे ।
श्याम प्रसाद, दाई राम प्रसादको प्रतिपक्षमा उभियो । उ प्रतिपक्ष दलका नेता भए । 'यदि मैले अर्को चुनावमा जितेँ भने, राम प्रसादलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही गर्छु, जेल हाल्छु भन्दै गाउँलेहरूलाई अाफ्नाे पक्षमा समेट्दै हिँड्न थाल्याे । नभन्दै श्याम प्रसादले अर्काे पटक गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जित्यो । श्याम प्रसाद पनि माैकाकाे फाइदा उठाउन किन चुक्थ्याे र उसले पनि दाइले जस्तै गरेर सम्पत्ति जाेड्न थाले ।
अब दुवै भाइको आर्थिक स्थिति गाउँमै सबै भन्दा राम्रो र बलियो छ । दुई भाइको विवादमा गाउँका सयाैँ जनता सहिद, अपाङ्ग भए, घरबारबिहिन भए । तर ती दाजुभाइको झगडा अझै टुङ्गो लागेको छैन । साेझा गाउँलेहरू अझै संघर्ष गर्नु पर्छ भन्दैछन् । बिचराहरु अझै राम प्रसाद र श्याम प्रसाद दाजुभाईका लागि लड्दैछन्, मर्दैछन् । तर ती दाजु-भाइ आफ्नै गाउँमा मागेर खाँदा-खाँदै स्थापित भएकाे बिर्सिसकेका छन, गाउँलेहरु चेतना भया ।